Google Pixel Benchmarks Ayaa Meel Dheer Ka Dhigay iPhone 7 | Wararka IPhone
Jaangooyooyinkii ugu horreeyay ee Google ee Pixel ayaa meel fog ka dhigay iPhone 7; ka xun iPhone 6s ilaa xuddunta
Shalay oo Talaado ahayd, Google waxay tallaabo aad u muhiim ah u qaaday shirkaddeeda iyada oo soo bandhigtay Pixel iyo Pixel XL, laba taleefan oo casri ah oo noqon doona kii ugu horreeyay ee ay soo saarto shirkadda matoorrada raadinta oo ay ku talo jiraan inay ka dhigaan barnaamijyadooda iyo qalabkoodaba si buuxda u shaqeynaya. Labada terminaalba waxay isticmaali doonaan nidaamka hawlgalka ee Android, in kastoo aysan isticmaalin ereygaas intii ay soo bandhigeen oo dhan, iyo kii ugu horreeyay bartilmaameedyo la daabacay ayaa naga dhigeysa inaan u maleyno in taajka taleefanka ugu dhaqsiyaha badan uu ku sii nagaan doono iPhone 7 madaxiisa muddo dheer.
Imtixaankan waxqabadka caadiga ah, Pixel iyo Pixel XL Way heleen dhibic ah 1665 imtixaanka hal-xudunta ah iyo 4176 dhibcood imtixaanka dhowr-geesoodka ah. Natiijooyinkani waxay dhigayaan bilowga cusub ee Google a wax yar ka sarreeyaa iPhone 6s ee tijaabada dhowr-geesoodka ah (4106) laakiin aad uga dambeeya imtixaanka kaliya ee muhiimka ah (2508). Haddii aan tixgelinno in inta badan qalabka elektiroonigga ahi uu adeegsanayo hal xudun, waxaan u malayn karnaa in iPhone 6s uu ka dhaqso badan yahay Pixel iyo Pixel XL maalinba maalinta ka dambaysa.
Google Pixels wuu ka gaabiyaa iPhone 6s inta badan
Oo hadaan dhihi karno waxbaa cadaalad noqonaya hadaan isbarbar dhigno smarpthones-ka cusub ee Google iyo iPhone 6s ee la soo bandhigay 2015, kala duwanaanshuhu waa xusid mudan hadaan isbarbar dhigno dhibcaha uu helay iPhone 7; Imtixaanka hal-xudunta ah, taleefankii ugu dambeeyay ee Cupertino wuxuu keenaa wax ka badan laba jibbaar Pixels (3430), halka imtixaanka multi-core-ka ah iPhone 7 wax aan ka yarayn 36% dhakhso badan.
Labada nooc ee Google Pixel waxay isticmaalaan Snapdragon 821 processor afar-geesle ah (laba 2.15GHz iyo laba 1.6GHz) waxayna leeyihiin 4GB RAM. IPhone 7 wuxuu leeyahay A10 Fusion processor sidoo kale quad-core, laba ka mid ah waxqabadkoodu sarreeyo 2.34GHz iyo laba tayo sare leh, laakiin leh 2GB RAM oo ah nooca 4.7-inji ah iyo 3GB oo loogu talagalay nooca Plus. Marka laga eego, Google waxay ku qasbanaan doontaa inay sii wado shaqadeeda si ay uga fiicnaato Apple waxqabadka moobiilka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Android » Jaangooyooyinkii ugu horreeyay ee Google ee Pixel ayaa meel fog ka dhigay iPhone 7; ka xun iPhone 6s ilaa xuddunta
Kuwa Google waa busteyaal. Pixel waa wax qarsoon, foolxumo ayaa ah hoos u dhigid. A xiaomi waxay u egtahay mid kafiican.
Maxay ku soo kordhinayaan moobilkan? Waxba, wax badan oo isku mid ah laakiin fool xun.
Waxay wax ku biirineysaa wax uusan blogkani ka dhawaajin: Kaamirada ugu wanaagsan ee hadda jirta ee casriga ah, sida uu sheegayo shirkadda caanka ah ee DxOMark, kana sarreysa Iphone 7/7 Plus.
Haa, iyo waliba sida uu qabo dumaashigay kaamirada ugu fiican ... Hahaha
Sideed u sharfeysaa naanaystaada ...
Ma waxaad ka hadlaysaa naanadeyda? Laakiin miyaadan wali garwaaqsanin inay adiga tahay markaad muraayadda fiiriso? Horay u soco oo naftaada nacas ha u dhigin mar dambe, xitaa ma ogid waxa DxOMark yahay.
Kamarad weyn, laakiin wax kasta oo kale waxay ka tagtaa waxyaabo badan oo la doonayo. Naqshadeynta waa dambi, laakiin xitaa way ka sii xun tahay in la helo terminal ka awood yar kan iPhone 6s.
Haddii aad rabto inaad bixiso 650 XNUMX oo ah kamarad isku dhafan oo wanaagsan oo wicitaan sameyn kara, wey fiicantahay. Laakiin taasi waa xitaa xitaa nacasnimada sidaad u iibsan doontaa oo kale, qoto dheer hoosta waxaad ka ogtahay inay tahay khiyaano sida mobilada.
Oh, laakiin miyaad halkan ku caytami kartaa adigoo ugu yeeraya qof ra'yi dhiibanaya "caaqil?" Hagaag, salaan, doqon. Waad aragtay, waan ka sii sifiican ahay.
Apple weli waa shirkadda ugu qiimaha badan adduunka
Dhamaan wararkii ay Google kusoo bandhigtay Google Pixel-ka cusub